चौधपटक अनसन बसेर ल्यायको अध्यादेश सरकारले कुल्चन खोज्यो ,, – Ranga Darpan
चौधपटक अनसन बसेर ल्यायको अध्यादेश सरकारले कुल्चन खोज्यो ,,
असार,९ काठमाडौं – अनसन डा. गोविन्द केसीले माईतिघर मण्डलामा आन्दोलन गरेका छन् ।डा. केसीका अनुसार सबैले एकरुपता स्वास्थ्य सिक्षा पाउन पर्ने नेता र माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा खारेज गर्न पर्ने, जनता र विद्यार्थीमुखी ऐन आउनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलन गरेका छन्। माईतिघर मण्डलामा सरकारले आन्दोलन गर्न नपाउने भने पनि केसीले तेही बाट आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तत्काल ल्याउन र माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आफ्नो अगुवाईमा आन्दोलन गरेका छन् ।यदि सरकारले यो कुराको बेवास्ता गरे आफु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने समेत चेतावनी दिय।
केसीले हालसाल मात्र शिक्षामन्त्रिलाई भेटेर आयको र शिक्षामन्त्रीले ‘अध्यादेश जे छ, त्यही पास हुन्छ भन्ने पनि छैन ?’ भनेको सुनाउँदै उनले नेता र माफियामुखी विधेयक ल्याउन खेल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘राज्य माफियाहरुले चलाइरहेका छन् । माफियाको चाल चलन विना केही काम हुँदैन ।
यसको अर्थ नेता नै माफिया हुन् भन्ने बुझिन्छ ।उनले भने उधोगपति भन्दा पनि धनि छन्, नेता कसरि भय त ? सबिधान समाजवाद उन्मुख र मुलुक गणतन्त्रपार्टी भयपनी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भने चरम व्यवसायिकरण गरीयको उनले भने।
चौध पटकको अनसनपछि अध्यादेश आयको हो अहिले तेस्लाई कुल्चने प्रयास गरियको छ। हाम्रो माग पुरा नभय हामि कसरि सम्झाउछौ त्यो था हुन्छ उनले भने। केसी सरकार भरस्टचार प्रति शुन्य तिम्रो सहन्सिलता कि सहभागिताको ब्यानर प्रदशनकारिको हातमा राखेर उनले आन्दोलन गरेका छन् ।
एसईई परिक्षाको नतिजा आज सार्बजानिक हुने ,,
कुवेत जान लागेका पाँच महिला विमानस्थलबाट फिर्ता ,,